မောင်လို့ဘဲခေါ်ပါ အန်တီ – Grab Love Story
ဝေလကြီးသည် အိပုံ့တို့ သားအမိ ကို သူ့အိမ်မှာ ခေါ်ထားလိုက်ပြီးတဲ့နောက် ဟိုတုံးကလို လမ်းဘေး ထမင်းဆိုင်တွေမှာ ကြုံသလို စားနေရတဲ့ ဘ၀မျိုးကနေ ကင်းဝေး လွတ်မြောက်သွားသည် ။ အိပုံ့တို့ သားအမိသည် ထမင်းဟင်းတွေ ချက်ပြီး သူ့ကို ဂရုတစိုက် အမြဲကျွေးနေလို့ သူသည် ဝေလကြီး ဆိုတဲ့ နံမည်နဲ့ လိုက်ဖက်အောင် ၀တုတ်ပြဲကြီး ဖြစ်လာတော့မည် လို့ စနေမက နောက် သည် ။ ဝေလကြီးသည် တကောင်ကြွက် ဘ၀နဲ့ တယောက်ထဲ နေလာခဲ့သူ တယောက် ဖြစ်လို့ အိပုံ့တို့ သားအမိ သူနဲ့ လာနေတာကို ကျေနပ် သဘောကျနေသည် ။အင်း အိပုံ့ကို စတွေ့ကထဲက သူ သဘောကျခဲ့တာ ဖြစ်သည် ။
နောက်ပိုင်း အိပုံ့ရဲ့ အမေကို တွေ့လာတော့ ချောချောဖြူဖြူ နဲ့ စွင့်ကားတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေနဲ့ အိပုံ့အမေ ကိုလည်း သူ သဘောကျမိပြန်သည် ။ သူတို့ သားအမိနဲ့ တအိမ်ထဲ နီးနီးကပ်ကပ် နေနေရတဲ့ အခါ ဝေလကြီးရဲ့ စိတ်တွေ ဖေါက်ပြန် နိုးကြွနေခဲ့သည် ။ အိပုံ့ကလည်း ဝေလကြီး စလိုက်ရင် လက်ခံမယ့် ပုံစံ ရှိနေသည် ။ သမီးရော အမေရော သူ သဘောကျနေမိသည် လို့ ဆရာစိုးနဲ့ ဆုံခိုက် ရင်ဖွင့်လိုက်သည် ။ ဆရာစိုးက တဟားဟား ရယ်သည် ။ “ မင်း တော်တော် အားကြီးတဲ့ကောင်ဘဲ….ဟီး…လုပ်ကွာ…..ချသာချ…..” လို့ ပြောသည် ။
အားပေးသည် ။ မြှောက်ပေးသည် ။ဒီနေ့ ဝေလကြီး အိမ်ပြန်နောက်ကျသည် ။သူတို့အဖွဲ့သည် အထက်က ညွှန်ကြားချက်အရ “ လူကုန်ကူးဂိုဏ်းကြီး ” တဂိုဏ်းကို “ လိုက် ”နေရသည် ။ ကွင်းဆက်တွေကို တခုချင်း သေသေချာချာ လိုက်နေသည် ။ တခါထဲ မိရာကို မဖမ်းပစ်လိုက်သေးဘူး ။ ခေါင်းဆောင်သူတွေ နောက်ကွယ်က အားပေးကူညီနေသူတွေကိုပါ သိချင်တဲ့အတွက် ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့ လှန်ထားပြီး စောင့်ကြည့်နေကြသည် ။ သူတို့အဖွဲ့ထဲက ဘကြီးခိုင်နဲ့ ဘုလက်တို့က ညဖက်ပါ တာဝန်ယူပြီး နောက်ယောင်ခံလိုက်..စောင့်ကြည့်တာဝန် ကို ဆက်ယူနေသည် ။ ဝေလကြီးကိုတော့ ဒီည ပြန်ခွင့်ပေးလိုက်သည် ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အိပုံ့ရဲ့ အမေ ဒေါ်ဝိုင်းစု အိပ်နေပြီ ။ အိမ်တံခါးကို အိပုံ့က လာဖွင့်ပေးသည် ။ အိပုံ့လည်း အိပ်ရာထဲက ထလာပုံရသည် ။ ဆံပင်ဖရိုဖရဲနဲ့ အိပ်မှုံစုံမွှား အိပုံ့သည် က၇ိုကရိုနဲ့ တမျိုးလေး လှနေသည် ။
“ အကို..ထမင်း စားအုံးမလားဟင်…” လို့ လေသံလေးနဲ့ မေးလိုက်တဲ့ အိပုံ့သည် ဝေလရဲ့ စိတ်ထဲမှာ တအား လှနေသည် ။ ချစ်စရာကောင်းနေသည် ။ ဘိုက်က ဒီလောက် မဆာပေမယ့် အိပုံ့ ပြင်ကျွေးတဲ့ ညစာကို သူနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် နှစ်ယောက်ထဲ စားချင်တဲ့ အတွက် “ အင်း စားမယ်…အိပုံ့ကော စားပြီးပြီလား…” လို့ မေးလိုက်သည် ။ အိပုံ့က ရယ်သည် ။ “ အကိုက လည်း..အချိန်ကိုလည်း ကြည့်ပါအုံး…ညနက်လှပြီ..အိပုံ့..အမေနဲ့ ညနေထဲက စားပြီးပြီ..အကိုရဲ့..လာ….အကို့ ကို ဟင်းနွှေးပေးမယ်…” လို့ ပြောပြီး မီးဖိုခန်းထဲကို ဦးဆောင်ပြီး အရှေ့က သွားလိုက်တဲ့ အိပုံ့ရဲ့ ခါးသေးသေး အောက်က တင်လှလှတွေကို သူ အငမ်းမရ ကြည့်လိုက်မိသည် ။ဟူး…ကောင်းလိုက်တဲ့ အိုး…။ တုန်ခုံနေကြသည် ။
သူ ထမင်းစားတာကို ဘေးကနေ ထိုင်ကြည့်နေတဲ့ အိပုံ့သည် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး အိန္ဒြာကျော်ဇင် ပြုံးတဲ့ အပြုံးလေးမျိုးနဲ့ ။ ဝေလကြီး ထမင်း ဆက် မစားနိုင်တော့ ။ “ ဟင်….တော်ပြီလား..ဘာလဲအကို..၀ိတ်လျော့နေလို့လား…..” “ ဟင့်အင်း….မစားနိုင် မအိပ်နိုင်တာ ကြာပြီ…..” “ ဘာလို့လဲဟင်..မနေ့ညတုံးက အကို အိပ်နေတာမှ သိုးလို့…ဟုတ်လို့လား……” “ ဟုတ်တယ်…..အကို့မှာ ဝေဒနာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံစားနေရတယ်..အိပုံ့…” “ ဟယ်..ဘာဖြစ်လဲ အကို..ဘိုက်အောင့်တာလား….” “ မဟုတ်ဘူး…..” သူ စားထားတဲ့ ပုဂံခွက်ယောက်တွေကို သိမ်းပေးနေတဲ့ အိပုံ့အနားကို တိုးကပ်သွားလိုက်သည် ။
“ ဟင်..အကို..ဘာလိုချင်လဲဟင်…” “ အကို လိုချင်တာကို ပေးမှာလား….” “ အကိုက ဘာလိုချင်လို့လဲ….” “ အိပုံ့ရဲ့ …. အချစ်…” “ အို..အကိုကလည်း……” အိပုံ့ မျက်နှာလေး ရဲတွတ်သွားသည် ။ အိပုံ့ခါးသေးသေးလေးကို ဆွဲကာ ဖက်လိုက်သည် ။ သူ့ရင်ခွင်ထဲကို အိပုံ့ ရောက်လာသည် ။ အရင်ဆုံး နဖူးဝင်းဝင်းလေးကို နမ်းလိုက်သလား ။ နှာခေါင်းလေးကို နမ်းမိသလား ။ မသိလိုက် ။ အနမ်းတွေက အိပုံ့ရဲ့ မျက်နှာ အနှံ့မှာ ။နောက်ဆုံး သိလိုက်တာက အိပုံ့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖေါင်းအိအိလေးတွေကို သူ့နှုတ်ခမ်းတွေ နဲ့ စုတ်နေမိပြီ ဆိုတာကိုပါဘဲ ။ အိပုံ့မျက်လုံးလေးတွေ မှိတ်သွားသည် ။ နှုတ်ခမ်းတွေက တော်တော်နဲ့ ခွာလို့ မရပေမယ့် ခွာခွာချင်း သူက “ သိပ်ချစ်တယ်…အိရယ်…” လို့ ပြောလိုက် သလို အိပုံ့ကလည်း “ အတူတူဘဲ အကို..အိလည်း အကို့ကို သိပ်သိပ်ချစ်တယ်….” လို့ ပြန်ပြောလိုက်သည် ။
ပွင့်လင်းတဲ့ အိပုံ့ကို သူ တအား သဘောကျသွားသည် ။ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဖက်ထားကြတော့ ကိုယ်အရှေ့ ပိုင်းချင်း ပူးကပ်ထိတွေ့နေသည် ။ အိတင်းတင်း ရင်စိုင်တွေက သူ့ရင်ဘတ်နဲ့ ဖိကပ်မိနေသည် ။ သူ့လက်တ ဖက်က အိပုံ့ရဲ့တင်ပါးအိအိတွေ အပေါ်ကို ရောက်နေသည် ။ နှုတ်ခမ်းချင်း ပြန်ပူးကပ် စုတ်မိကြပြန်သည် ။ လက်က အလိုလို အိပုံ့ရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကို ဆုပ်ညှစ်နေမိသည် ။ ကောင်းလိုက်တဲ့ ကျန်းမာရေး …။ တောင့်လိုက်တဲ့ ဖင်တုံးကြီးတွေ ။ ဝေလကြီးရဲ့ လက်ဖ၀ါးတွေက အပီကို ဆုပ်နယ်ကိုင်တွယ်နေမိသည် ။ အိပုံ့လည်း သူ့လိုဘဲ ကာမရာဂစိတ်တွေ ထကြွနေပြီ ။ သူ့ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဖက်ထားပြီး သူ စုတ်နမ်းတာတွေကို ပြန်တုံ့ပြန်နေသည် ။ အိပုံ့သည် ဝေလကြီးရဲ့ အနမ်း အထိအတွေ့တွေကြောင့် ဝေလကြီးရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ ပျော့ကျခွေယိုင်သွားသည် ။ ကာမစိတ်တွေ တအား ထကြွနေတာကြောင့် ဝေလကြီး ပြုသမျှ ခံဖို့ သူမကိုယ်ကို ပေးအပ်လိုက်ပြီ ။ ဝေလကြီးလည်း အိပုံ့ကို ကောက်ချီမလိုက်ပြီး ခြေလှမ်းကျဲကျဲနဲ့ သူ့အိပ်ခန်းထဲကို ခေါ်သွားလိုက်သည် ။ အိပုံ့ရဲ့ အိမ်နေရင်း ၀တ်ထားတဲ့ ထမိန်နွမ်းလေးသည် ပြေလျော့နေသည် ။
အိပုံ့သည် ထမိန်ကို ပြန်ချည်နှောင် ဖို့ မကြိုးစားတော့ ။ ဝေလကြီးရဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေး လန်ကျနေတဲ့ အိပုံ့ရဲ့ မျက်လုံးတွေ ပိတ်နေသည် ။ နှုတ်ခမ်းလေး တွေက ဖူးကြွနေသည် ။ မပွင့်တပွင့်နဲ့ ဝေလကြီး ရဲ့ နှုတ်ခမ်းကြီးတွေ လာ စုတ်မှာကို မျှော်လင့်နေကြသည် ။ အရင်ဆုံး ဝေလကြီးသည် အိပုံ့ရဲ့ တီရှပ်ဟောင်းလေးကို ချွတ်လိုက်သည် ။ အိပုံ့သည် သူချွတ်တာကို မကန့် ကွက်တဲ့အပြင် ကူညီပြီး ချွတ်ပေးလို့ ဝေလကြီး သဘောကျသွားသည် ။ လုံးတင်းပြီး တွဲမကျသေးတဲ့ အိပုံ့ရဲ့ အပျိုမ နို့လုံးကြီးတွေကို ဝေလကြီး ကြည့်ပြီး တံတွေး ဂုကနဲ မြိုချလိုက် ပြီး နှာခေါင်းကြီးနဲ့ တရှုံ့ရှုံ့ စနမ်းသည် ။ နို့သီးခေါင်း အဖုလုံးလေးတွေက မာကျော ထထောင်နေသည် ။ ကာမ စိတ်တွေ ထကြွလို့ ဖြစ်မည် ။ “ အိပုံ့ကို ချစ်လားဟင်…..” လေသံလေးနဲ့ မေးလိုက်တဲ့ အသံနဲ့ ဝေလကြီး ရဲ့ “ အင်း..အရမ်းချစ်တယ်….” လို့ ပြောလိုက်တဲ့ အသံက တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ညအလည်မှာ သိသာလှလို့ တရေးနိုးလာတဲ့ အိပုံ့ရဲ့ အမေ ဒေါ်ဝိုင်းစု ကြားသွားသည် ။
ဟယ်…..သ…သမီးလေး….နဲ့…မောင်ဝေလ…….. နားစွင့်ထောင်လိုက်တော့ “ ပြွတ်…ပြွတ်…ပြွတ်..ပြွတ်….” ဆိုတဲ့ အသံတွေကို ကြားလိုက်ရသည် ။ တဆက်ထဲမှာ ဟင်း..အင်း..ဟင်း…..ဟင်း……နဲ့ ညည်းလိုက်တဲ့ အိပုံ့ရဲ့ အသံလေးတွေကိုပါ ကြားလိုက်ရသည် ။ ဟင်…..ဒါ….ဒါ…..ဒါ…..လိုးတဲ့ အသံတွေလား….. အာ…မဟုတ်လောက်ဘူး……နို့တွေကို စို့ပေးနေတဲ့ အသံတွေဘဲ ဖြစ်မယ် . . . . ဒေါ်ဝိုင်းစုသည် သမီးနဲ့ ဝေလတို့ကို သွားပြီး မတားမိတဲ့အပြင် သူတို့အခန်းဆီက ကြားနေရတဲ့ အသံတွေကို သဲသဲကွဲကွဲ ကြားချင်နေတဲ့ စိတ်တွေ ပေါ်နေသည် ။ အိပုံ့ရဲ့ ညည်းငြူသံတွေကို ဆက်တိုက် ကြားနေရသည် ။ ဒေါ်ဝိုင်းစုလည်း ခြေတွေ လက်တွေ ဒူးတွေ တုန်နေသည် ။ ဒီ ဝေလ ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးသည် သူ့ကို ကြည့်တဲ့ ပုံစံတွေက မရိုးခဲ့ဘူး ..။ တနေ့နေ့ သူ့ကို ကြံစည်လာလိမ့်မယ် လို့ ထင်ထားတာ။ ဝေလ ရုပ်က တဏှာထန်မယ့် ရုပ် ။ ရင်ခုံမိခဲ့တာ ။ အခု အိပုံ့ကို ကြံစည်နေပြီ ။ ဒေါ်ဝိုင်းစု အနေနဲ့ ဝေလကြီးက ကျေးဇူးရှင် ။ အိမ်ပေးနေရုံမက လုပ်ငန်းတခုခု လုပ်ဖို့ကိုလည်း ငွေရင်း မတည်ပေးမည် ဆိုတော့ သမီးလေးရော သူရော ဒီကောင်ကြီးကို ဖူးဖူး မှုတ်ထားမိကသည် ။ သူတို့ အဖွဲ့က အရမ်း သဘောကောင်းကြသည် ။
အိပုံ့လေးရဲ့ မျက်နှာနဲ့ ဒေါ်ဝိုင်းစုကို လည်း ပေးကမ်းကြတာတွေက မနည်းဘူး ။ သူတို့ကောင်းလွန်းတာတွေကြောင့် သူတို့ကိုလည်း အစစ ကူညီ လုပ်ကိုင်ပေးမည် လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးသား ။ အိပုံ့ရဲ့ “ အား……အိုး….” လို့ အော်လိုက်တဲ့ အသံက တော်တော် ကျယ်သွားသည် ။ ကြည့်ရတာ ဝေလ အိပုံ့ကို လိုးနေပြီ ။ ဒေါ်ဝိုင်းစုလည်း စိတ်တွေ တအား လှုပ်ရှားနေပြီး ပေါင်တန် နှစ်ဖက် ကြားက စိုစိစိ လို ခံစားမိလို့ ကျွတ်ပြေနေ တဲ့ ထမိန်ထဲ လက်သွင်းပြီး စမ်းလိုက်မိတဲ့အခါ အရည်တွေ စိုစိုရွှဲနေတာကို စမ်းမိလိုက်သည် ။ ဟယ်….ငါ….ငါ… တအားကို စိတ်တွေ လာပြီး အရည်တွေ စိုနေပါလား……။ ဝေလကြီးရဲ့ အခန်းထဲက အသက်ရှူသံပြင်းပြင်းတွေ အိပုံ့ညည်းသံတွေ ဆက်တိုက်ကြားနေရသည် ။ ကုတင်မြည် သံတွေရော….။ ဒေါ်ဝိုင်းစုသည် တတ်နိုင်ရင် သူတို့ ဘာတွေ လုပ်နေကြသလဲ ဆိုတာတွေကို ပြေးကြည့်လိုက်ချင်စိတ်တွေ ပေါက် နေသည် ။ သူ လာချောင်းသည် ဆိုတာကိုလည်း သူတို့ သိလို့ မဖြစ်ဘူး ။ ဝေလကြီးရဲ့ အိပ်ခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်မှာ…… အိပုံ့သည် ပေါင်တွေကို အစွမ်းကုန် ဖြဲကားပေးထားသည် ။
ဝေလကြီးသည် အိပုံ့ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ကျကျနန ယက်ပေး အပြီး စလိုးသည် ။ သူ့တုတ်ဖီးလှတဲ့ လိင်တန်ချောင်းကြီးကို အိပုံ့ရဲ့ အရည်တွေ စိုစိုရွှဲနေတဲ့ စောက် ဖုတ်ပေါက်ထဲကို တေ့ဖိသွင်းလိုက်သည် ။ “ အား…အိုး……” အလုံးတုတ်တဲ့ ဒစ်ကားကြီးသည် စောက်ဖုတ်ထဲကို မဆန့်မပြဲကြီး တိုးဝင်လာလို့ အိပုံ့ အော်မိသွားသည် ။ အို…အမေတော့ ကြားတော့မှာဘဲ … လီးတုတ်ကြီး ဆက်တိုက် တထစ်ထစ်နဲ့ ၀င်လာလို့ ခံစားရတာတွေကို အသံမထွက်စေချင်လို့ အံကြိတ်ပြီး ခံလိုက်သည် ။ သူ့ဟာကြီးကလည်း ကြီးလိုက်တာ….။ နာလည်းနာ ကောင်းလည်းကောင်း..နာကောင်းကြီး…..။ဒေါ်ဝိုင်းစုသည် ကြားနေရတဲ့ အသံတွေကြောင့် စိတ်တွေ အရမ်း လှုပ်ရှားနေသည် ။ အိပ်ရာကနေ ထထိုင်လိုက်မိပြီး နားစွင့်ထောင်နေမိရာက သမီးအိပုံ့ရဲ့ တဟင့်ဟင့် တအင်းအင်း ညည်းသံတွေ က ပို ကျယ်လာတဲ့အတွက် ဝေလကြီးနဲ့ သမီး အိပုံ့တို့ ဘာတွေ လုပ်နေကြတယ် ဆိုတာကို မျက်စိနဲ့ တပ်အပ် မြင်ချင်တွေ့ချင်စိတ်တွေက ထိန်းလို့ မရအောင် ပေါ်ပေါက်လာသည် ။
ခြေဖျားထောက် နင်းပြီး သမီး အိပုံ့နဲ့ ဝေလကြီးတို့ ရှိနေတဲ့ တဖက် အိပ်ခန်းဖက်ကို လျောက်သွားလိုက်မိရင်း အထဲကို ချောင်းကြည့်လိုက်သည် ။ သမီးနဲ့ သမီး ချစ်သူတို့ ကာမစပ်ယှက်ကြတာကို မချောင်းကြည့်သင့်မှန်း သိရက်နဲ့ ထကြွလာတဲ့ ကာမစိတ်တွေကို မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ချောင်းကြည့်မိပြီ ။ ဝေလကြီးနဲ့ အိပုံ့တို့သည် ကုတင်ပေါ်မှာ မိမွေးတိုင်း ကိုယ်တုံးလုံးကြီးတွေနဲ့ ထပ်ရက်ကြီး ကာမပွဲကို နွှဲဆင်နေ ကြတာကို ဒေါ်ဝိုင်းစု ဘွားဘွားကြီး မြင်လိုက်ရလို့ ဒူးတွေ မခိုင်တော့ဘဲ ယိုင်ကာလဲသွားတော့ မတတ် ဖြစ်ရလို့ ဘေးက နံရံကို လက်နဲ့ ထိန်းကာ ကိုင်လိုက်ရသည် ။ ဖြူဖွေး အချိုးကျတဲ့ အိပုံ့ရဲ့ ပေါင်တန်ရှည် ဖွေးဖွေးတွေကို ဖြဲကားပြီး နီညိုညို စောက်ဖုတ်ကွဲကြောင်းကြီးထဲကို လုံးပတ်တုတ်တုတ် လီးရှည်ကြီးနဲ့ တစွပ်စွပ် ဖိသွင်း စပ်ယှက်နေတာကို ဒေါ်ဝိုင်းစု ငေးစိုက်ကြည့်နေမိသည် ။
ဝေလကြီးကို အခုလို အ၀တ်မပါဘဲ ကိုယ်တုံးလုံးကြီး မြင်ရတွေ့ရတာကလည်း တကယ့်ကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါ။ အိပုံ့ရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို ဖိလိုးနေတဲ့ သူ့လီးကြီးကိုလည်း ဒေါ်ဝိုင်းစု တအား ကြိုက်သွားမိသည်။ ဒီလီးကြီးနဲ့ အ လိုးခံလိုက်ချင်စိတ်လည်း ပေါ်ပေါက်သွားမိပြီး လက်တဖက်နဲ့ ပေါင်ကြားကို စမ်းအုပ် ကိုင်မိလိုက်သည် ။ မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကြောင့် စောက်ဖုတ်သည် အရည်တွေ တအား ထွက်စိုနေသည် ။ လက်ချောင်းတွေက ဖိ ဖိပွတ်နေမိသည် ။ အိပုံ့နဲ့ ဝေလကြီးတို့ကတော့ သဲသဲမဲမဲ လိုးနေကြလို့ ဒေါ်ဝိုင်းစု ချောင်းကြည့်နေတာကို သတိမမူမိကြ ။ ဝေလကြီးသည် တင်းကြပ်ပြီး အိစက်စိုရွှဲနေတဲ့ အိပုံ့ရဲ့ စောက်ဖုတ် အရသာထူးကြောင့် ဆက်တိုက် ဖိလိုးနေပြီး အိပုံ့ရဲ့ နို့ကြီးတဖက်က နို့သီးလေးကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စို့ပေးနေသည် ။ သူ့ဂွေးစိကြီးနှစ်လုံးက လိုးထည့်လိုက် တိုင်း အိပုံ့ဖင်ကြားကို ဘပ်ကနဲ ဘပ်ကနဲ ရိုက်ခတ်နေသည် ။ လုံးပတ် တုတ်တုတ်လီးကြီးသည် စောက်ဖုတ်ပေါက် ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲကို ၀င်ထွက်နေသည် ။
ဖွပ်ဘွတ်ဘွတ် ဆိုတဲ့ အသံတွေ တချက်တချက် ထွက်သည် ။ အိပုံ့ရဲ့ ညည်းသံအော်သံတွေက ကျယ်လွန်းနေသည် ။ အိပုံ့သည် တဖက်ခန်းက အမေ ကြားသွားမှာကို သတိမ ထားမိတော့ဘူး ။ လီး အရသာထူးကြောင့် တအီးအီး တအားအားနဲ့ အော်ဟစ်နေမိရင်း ဝေလကြီး လိုးဆောင့် သမျှတွေကို ဖင်ကော့ပေးကာ ခံယူနေသည် ။ မနေ့က တနေကုန် ပင်ပန်းသည် ။
ညစ်ထေးတို့ကို နောက်ယောင်ခံလိုက်တာ ထမင်းတောင် လွတ်သွားသည် ။ ညဖက်ရောက်တော့ စိုးရအောင် က ဝေလကြီး ပြန်နားအုံး..မနက်ကျမှ စောစော ပြန်ဆုံကြတာပေါ့ လို့ ပြောလို့ ဝေလကြီး အိမ်ပြန်သည် ။ သူတို့အဖွဲ့သုံးတဲ့ ဟွန်ဒါဖစ်ကားလေးနဲ့ အိမ်ကို ပြန်သည် ။ အိမ်ထဲ ၀င်လိုက်တဲ့အချိန် အိပုံ့အမေ ဒေါ်ဝိုင်းစုက အိပုံ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားဖူး လိုက်သွား တယ် လို့ ပြောပြသည် ။ အိပုံ့ ဘာလုပ်လုပ် သူ ဂရုမစိုက်ပါ ။ သူ့ခေါင်းထဲမှာ တွေးလိုက်တာက အိပုံ့အမေ ဒေါ်ဝိုင်းစုနဲ့ သူနဲ့ တအိမ်ထဲမှာ နှစ်ယောက်ထဲ ဆိုတာကိုပါ ။ “ သား..ထမင်းစားမလားဟင်….အန်တီ ခူးလိုက်မယ်…..” လို့ ဒေါ်ဝိုင်းစုက လာမေးသည် ။“ စားမယ်.အန်တီ..ကျနော် ရေအရင် ချိုးလိုက်အုံးမယ်..တနေကုန် အလုပ်များနေလို့ လူလည်း ချွေးစော်နံ ပေရေ နေတယ်….” “ ဟုတ်ပြီ..အန်တီ စားဖို့ ပြင်လိုက်မယ်နော်….” မီးဖိုခန်းဖက်ဆီကို လျောက်သွားတဲ့ ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ အနောက်ပိုင်း ကို ဝေလကြီး မသိမသာ ကြည့်လိုက်မိသည် ။
ဒေါ်ဝိုင်းစုသည် တင်ပါးကောင်းသည် ။ လှသည် ။ ၀ိုင်းစက် ဖုထွက်ကော့ထွက်နေသည် ။ ခါးကလည်း ခပ်သေးသေး ။ တံတွေးကို ဂုကနဲ မြိုချမိရင်း ဝေလကြီး ရေချိုးခန်းဖက်ကို တဘက်လေး ပုခုံးပေါ် တင်ပြီး ထွက်သွားလိုက်သည် ။ ဝေလကြီးက ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ ကိုယ်လုံးတွေကို ပစ်မှားမိနေသလို မီးဖိုထဲ စားဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဒေါ်ဝိုင်းစု မှာလည်း သမီး မရှိတဲ့အချိန် ဝေလကြီးနဲ့ သူနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ ဆိုတာကို ရင်ခုံ စိတ်လှုပ်ရှားနေပေသည် ။ ဝေလကြီးနဲ့ တအိမ်ထဲ နေနေတာ သမီးအိပုံ့နဲ့ ဝေလကြီးတို့ ချစ်တင်းနှီးနှော ချစ်ဗြူဟာခင်း ကြတာတွေကို သူမ အမြဲ ကြားနေရလို့ အကြိမ်ကြိမ်ဘဲ သူတို့လုပ်ကြတာကို ချောင်းကြည့်မိခဲ့သည် ။ တခါမှာ သူမ ချောင်းနေတာ ကို ဝေလကြီး သိသွားသည် ။ ဝေလကြီး သည် သူမ စိတ်ဝင်စားသည် ကို သိသွားသည် ။
တနေ့နေ့ ဝေလကြီးသည် သူမကို လာကြံစည်လိမ့်မည် လို့ ဒေါ်ဝိုင်းစု ထင်မိနေသည် ။ အခုလည်း ဒီကောင်ကြီး ရေသွားချိုးနေသည် ။ ခါတိုင်းလိုဘဲ ကိုယ်တုံးလုံးကြီး ချိုးမှာ သေချာသည် ။ သူရေချိုး တာကိုလည်း ဒေါ်ဝိုင်းစု ချောင်းဖူးသည် . .။ သူ့ငပဲကြီးက နည်းနည်းနောနော မဟုတ်ဘူး ။ သမီးအိပုံ့ ဒါကြီးကို ခံနိုင်တာကို ဒေါ်ဝိုင်းစု အံ့သြသည် ။ ဒီလီးကြီးကို သဘောကျမိပြီး ကိုယ့်ဖါသာ ပွတ်မိရတာက ခဏ ခဏ..။ အခုလည်း သူ့ကို ကိုယ်တုံးလုံး အနေအထားနဲ့ မြင်ချင်စိတ်တွေ ပေါ်နေသည် ။ သွားချောင်းချင်နေသည် ။ စိတ်တွေကို အရမ်းကို ချိုးနှိမ် ချုပ်တီးထားနေရသည် ။ ဒါပေမယ့် သမီး မရှိတုံး ချောင်းရတာက ပို လွတ်လပ်တာ မို့ ခြေထောက်တွေက အလိုလို ရေချိုးခန်းဖက်ကို ဦးတည်သွားမိနေသည် ။ ချောင်းနေကျ အပေါက်လေးကနေ ရေချိုးခန်းထဲမှာ တဘွမ်းဘွမ်းနဲ့ ရေခပ်ချိုးနေတဲ့ ဝေလကြီး ကို ချောင်းကြည့်လိုက်သည် ။
အို…. ဒေါ်ဝိုင်းစု တကိုယ်လုံး ကြက်သီးတွေ တဖျန်းဖျန်း ထသွားရသည် ။ သူမ မြင်ချင်နေတဲ့ ဝေလကြီး ရဲ့ လိင်တန် ဆာကြီးသည် မတောင်သေးတာတောင် လုံးပတ်တုတ်တုတ်နဲ့ အရှည်ကြီး တရမ်း၇မ်း ဖြစ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရ လို့ ခံချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ဖြစ်ပေါ်မိသွားရသည် ။ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ဝေလကြီးနဲ့ လိုးလိုက်ချင်မိသည် ။လက်တဖက်က အလိုလို ပေါင်ကြား ဂွဆုံနေရာကို ရောက်သွား ရသည် ။ ဖေါင်းကြွတဲ့ ယားနေတဲ့ အရည်တွေ စိုစိုရွှဲနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ကိုင်မိသွားရသည် ။ ဝေလကြီးသည် ရေချိုးပြီးသွားလို့ တဘက်ကြီးနဲ့ ကိုယ်ကို ပွတ်တိုက်ရင်း ပုဆိုးကို အမြန်ဝတ်လိုက်သည် ။ ဟာ..သူ ထွက်လာတော့မယ်….. ဒေါ်ဝိုင်းစုလည်း ချောင်းကောင်းကောင်းနဲ့ ချောင်းနေတာ ဝေလကြီး ထွက်လာတော့မှာမို့ ကဗျာကရာ ကုန်းနေရာ က ထလိုက်ပြီး မီးဖိုဖက်ကို ပြေးသွားလိုက်သည် ။ ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဝေလကြီးသည် ဒေါ်ဝိုင်းစု ရေချိုးခန်းဖက်က မီးဖိုဖက်ကို ပြေးသွားတာကို မြင်လိုက်သည် ။ “ ဟင်…..ဘာလို့ ပြေးတာလဲ..ရေချိုးခန်းဖက်မှာ ဘာလာလုပ်သလဲ..သူ ငါ့ကို လာချောင်းကြည့်တာလား….” ဝေလကြီးလည်း အ၀တ်မလဲတော့ဘဲ မီးဖိုခန်းဖက်ကို လျောက်သွားလိုက်သည် ။ ဒေါ်ဝိုင်းစုသည် နွှေးထားတဲ့ ပဲဟင်းတွေကို ဇလုံအသေးစားလေးထဲကို လောင်းထည့်နေသည် ..။ ဝေလကြီးကို ကျောခိုင်းထားသည် ။
ဟင်..ထမိန် အောက်ဖက် တင်ပါးကြီးတွေအနားမှာ အရည်ကွက်ကြီး ပါလား ။ တောက်..အန်တီဝိုင်းစု စိတ်တွေ တအား လာနေတာ ဖြစ်မည် ။ “ လာ…သား..စားကြရအောင်….” ဒေါ်ဝိုင်းစုသည် ခေါ်သာခေါ်သည် ။ မျက်လုံးချင်း မဆုံအောင် လွှဲကာထားသည် ။ နည်းနည်း တုန်တုန်ရီ၇ီ ဖြစ် နေတဲ့ပုံ ရှိသည် ။ သေချာသလောက်ဘဲ..။ငါ့လီးကို တွေ့ချင်လို့ လာချောင်းတာ …။ ( အန်တီ….အန်တီ့ကို ပြောစရာ ရှိလို့….) ဝေလကြီးရဲ့ အသံက အက်ကွဲကွဲနဲ့ ။ ( ဘာများလဲ သားရယ်……) ( ကျနော်..ကျနော်…..အန်တီ့ကို ချစ်မိနေတယ်….) ဒေါ်ဝိုင်းစု မအံ့သြပါ ။ သူကလည်း ဝေလကြီးကို တပ်မက်သဘောကျနေတာဘဲလေ ။ ( မဖြစ်သင့်ဘူး ထင်တာဘဲ မောင်ဝေလရယ်……) ( ကျနော် အနိတီ့ကို အိပုံ့နဲ့ မဖြစ်ခင်ထဲက ချစ်နေမိတာ..) ဝေလကြီးလည်း ဒေါ်ဝိုင်းစုကို ဖက်လိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကို စုတ်ပစ်လိုက်ပါပြီ ။ဒေါ်ဝိုင်းစုလည်း မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီး အတင်းထိန်းချုပ်နေခဲ့ရတာနဲ့ တဏှာကြွပြီး စိတ်မထိန်းနိုင်တာနဲ့ လွန်ဆွဲနေခဲ့ရာက ဝေလကြီးက အတင်းဖက် အတင်း နမ်းလိုက်တော့ ထိန်းချုပ်ခဲ့တာတွေ လွတ်ထွက်သွားပြီ ။ ဝေလကြီးကို တုံ့ပြန် နမ်းပြီး တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ပြန်ဖက်လိုက်မိသည် ။
ဝေလကြီးရဲ့ လျာကြီးက ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ ပါးစပ်ထဲက လျာကို ထိုးကစားနေသည် ။ သူ့လက်ကြီးတွေက ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ စွင့်ကားလုံးကော့နေတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကို အားရပါးရ ကိုင်ဆုပ်နေသည် ။ ဒေါ်ဝိုင်းစုသည် သမီးအိပုံ့နဲ့ အပီလိုး လိုးနေတဲ့ ဝေလကြီးကို စိတ်လာနေမိတာ ကြာပြီ ဆိုတော့ အခုလို ပွင့်လင်းသွားပြီ ဆိုတာနဲ့ သူကိုင်တာတွေကိုလည်း တအား သဘောကျမိသည် ။ ကျေနပ်နေသည် ။ “ ချစ်တယ်..အန်တီရယ်……” “ အန်တီလည်း သားကို ချစ်ပါတယ်ကွယ်…..” ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ ၀မ်းပျဉ်သား ခပ်စူစူလေးကို ဝေလကြီးရဲ့ မာတောင့်နေတဲ့ ဒုတ်ကြီးက လာထောက်နေသည် ။ ဒါကြီးကို စွဲလန်းမိခဲ့တာ ကြာနေပြီ ။ ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ဘဲ ဒီဒုတ်ကြီးဆီကို ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ လက်က ရောက်သွားရသည် ။
“ သားရယ်…အန်တီတို့ မှားနေကြသလားကွာ…..” လို့ ပါးစပ်ကသာ ပြောနေသည် ။သူမလက်ကတော့ ပုဆိုးပေါ် ကနေ ဒုတ်မာမာကြီးကို ပွတ်သပ်နေမိသည် ။ “ မမှားပါဘူး..အန်တီရယ်..ချစ်မိတာတော့ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ….ကျနော်က အန်တီ့ကို အိပုံ့ထက် အရင်တောင် ချစ်မိတာပါ…..” ဝေလကြီးရဲ့ လက်တဖက်က ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ ပေါင်ဂွဆုံနေရာကို စမ်းလိုက်သည် ။ “ ဟုတ်လို့လား….” “ ဟုတ်တယ်….အန်တီ့ကို အရမ်း စွဲလန်းနေတာ….” “ ယုံပါဘူး….အို့..” ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ စောက်ဖုတ်အကွဲကြောငးကို လက်ချောင်းတွေနဲ့ ပွတ်ဆွဲလိုက်လို့ ဒေါ်ဝိုင်းစု တွန့်တုန်သွားသည် ။ ဝေလကြီးက သူမကို အိပ်ခန်းထဲကို ဆွဲခေါ်သွားသည် ။
ကျွတ်လုလု ထမိန်ကို စွန်တောင်ဆွဲလို့ ဝေလကြီးရဲ့ အနောက်ကနေ ပါသွားတဲ့ ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ ပေါင်ကြား တ၀ိုက်မှာ အရည်တွေနဲ့ စိုစိုရွှဲနေပြီ ။ “ သားရယ်….ကြမ်းလိုက်တာ…..” “ သားလို့ မခေါ်နဲ့တော့….” “ မင်းက သားမက်လောင်းမို့ပါကွယ်….” “ ဟင်း..အခု လင် ဖြစ်တော့မယ်…အန်တီ….မောင်လို့ဘဲ ခေါ်တော့….” ဝေလကြီးသည် ဒေါ်ဝိုင်းစုကို ဖြုတ်ချင်နေတာ ကြာပြီ ။ အခုလို အခွင့်အခါကောင်းတဲ့အချိန်မှာ လက်မလွှတ်တော့ ။ ကုတင်ပေါ် အတက်မှာထဲက ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်အစားတွေကို အကုန်လုံး ချွတ်ပစ်လိုက်ပါသည် ။ သူ့ခါးဝတ်.ပုဆိုးကိုလည်း ချွတ်ချပစ်လိုက်တော့ နှစ်ယောက်စလုံး ဗလာကိုယ်တွေနဲ့ ဖြစ်ကုန်သည် ။ “ လာ အန်တီ..ကျနော် အန်တီ့ကို နမ်းပေးမယ်…နမ်းချင်နေတာ ကြာလှပြီ…..” ဒေါ်ဝိုင်းစုက သူမ နှုတ်ခမ်းကို စုတ်မည် လို့ ထင်လိုက်ပေမယ့် ဝေလကြီးက သူ့ခေါင်းကို ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ ကိုယ် အောက်ပိုင်းကို ဆင်းချသွားလို့ ဟဲ့ဟဲ့…ဘာလုပ်မလို့လဲ လို့ လန့်သွားပြီး ပေါင်တန်တွေကို ပူးစေ့ဖို့ ကြိုးစား လိုက်လေသည် ။
ဝေလကြီးက ပေါင်တန်တွေကို ဆွဲဖြဲကားလိုက်ပြီး အမွှေးပါးပါး နဲ့ စောက်ဖုတ်ဖေါင်းကြီးကို အား ရပါးရ နမ်းလေတော့သည် ။ “ အို..ဟာ…အင်….သား…သား…..ဘုန်းနိမ့်ကုန်ပါ့မယ်ကွာ…..” ဝေလကြီးက အကွဲကြောင်းကို သူ့နှာခေါင်းထိပ်နဲ့ အစုန်အဆန် ပွတ်ဆွဲသည် ။ “ အို..ဟင်…..အာ…….သား..ကောင်လေး..မင်း…မင်း သိပ်ဆိုးတယ်……” ပါးစပ်က ဆိုးတယ်လို့ ပြောနေပေမယ့် သူ့စိတ်ထဲက သဘောကျနေသည် ။ ကြိုက်နေသည် ။ နှာခေါင်းပြီးတော့ လျာကြီး….။ လျာအပြားလိုက်ကြီးနဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ဝေလကြီး ယက်နေသည် ။ ဒေါ်ဝိုင်းစု တ အား အော်ညည်းတော့သည် ။
“ အိုး…သား……အမလေး……ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲကွာ…..အား…….အူး…..အာ…အာ…..အို…..အမလေးလေး..” ပြတ်ပြတ် ပြိပြိ အသံတွေ ထွက်နေသည် ။ ဝေလကြီးရဲ့ ဘာဂျာသံတွေ သောသောညံနေသည် ။ “ အို…အီး……အီး…..အား…..အား……အား…….အား…..” ဝေလကြီးသည် အသက်ကြီးပေမယ့် မပျက်စီးသေးတဲ့ စောက်ဖုတ်လှလှကြီးကို ယက်လည်းယက် စုတ်လည်း စုတ်သည် ။ “ အမလေး..သားရယ်…..အိုးဟိုးဟိုး……အူး……..အူး…..” စောက်စိကို အစုတ်ခံလိုက်ရလို့ ဒေါ်ဝိုင်းစု ဖျတ်ဖျတ်လူးသွားသည် ။ တုန်ခါသွားသည် ။ ဝေလကြီးရဲ့ ခေါင်းကို လည်း ဖမ်းကိုင်လိုက်မိသည် ။ ဝေလကြီးသည် အနံ့အသက် မရှိတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို စိတ်ထဲက သဘောကျသွားသည် ။ ဒီမိန်းမ သန့်ရှင်း သည် လို့လည်း မှတ်ချက်ချလိုက်ပြီး တပြတ်ပြတ် နဲ့ ဆက် ယက်ပေးလေသည် ။ ဒေါ်ဝိုင်းစုလည်း မခံဘူးတဲ့ ဘာဂျာအယက်အစုတ်တွေကို ခံရလို့ တအား စိတ်လှုပ်ရှားနေသည် ။
လင်ဖြစ်သူက တခါမှ ဒါမျိုး မလုပ်ပေးဖူးခဲ့ဘူး ။ သားမက်လောင်းနဲ့ ဖြစ်ပျက်မိလို့ ရှက်သလိုလို စိတ်မကောင်းဖြစ်သလိုလို ၀မ်းနည်းသလိုလို ဖြစ်နေမိခိုက် ဝေလ ကြီးက ဘာဂျာမှုတ်တာကို ရုတ်ချည်း ရပ်ပစ်လိုက်ပြီး သူမ ကိုယ်ပေါ်ကို တက်လာလို့ “ သား….မကောင်းဘူး ထင်တယ်ကွယ်…အန်တီတို့ ရပ်လိုက်ကြရအောင်ကွယ်….” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ သို့ပေမယ့် ဝေလကြီးသည် သူမပြောစကားကို နည်းနည်းမှ ဂရုမစိုက် ။ နားမထောင် ။ သူ့ဒုတ်တုတ်တုတ်ကြီး ကို အရည်တွေ တအားရွှဲနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို ဖိသွင်းလိုက်ပါသည် ။ ဒီအထိအတွေ့ကို သူမ လိုလားနေခဲ့တာ လင်သေကထဲကပါဘဲ ။ တအားကို ယားပြီး လီး ဆာနေခဲ့တာပါ ။ အခုတော့ သူမလိုအင်ကို ဖြည့်ပေးမယ့်သူ က ရှိနေပြီ ။ သမီးလည်းလိုး အမေလည်းလိုးတဲ့ ငလိုးကောင်ကြီး ဝေလက သူ့လီးတုတ်တုတ်နဲ့ ဖိသွင်းပေးနေ ပြီ ။ “ အိုး……အီး…..” လီးထိပ်ခေါင်း မှိုပွင့်အော်လံကြီး ပြိကနဲ တင်းကနဲ စောက်ဖုတ်ထဲ အောင်းလာလို့ သူ့ကို လှမ်းဖက်ပြီး ပေါင်တန် တွေကို ဖြဲကားပေးလိုက်မိသည် ။ လီးသည် တုတ်လှသည် ။ ရှည်လည်း ရှည်သည် ။ စောက်ခေါင်းနံရံသားတွေကို တအား ပွတ်တိုက်သွားတဲ့ အထိ အတွေ့က သူမကို ဆတ်ဆတ်ခါ ကောင်းသွားစေသည် ။
“ အိုး…….အား….” ဝေလကြီး သည် ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ စောက်ဖုတ်သည် ဒီလောက် တင်းကြပ်လိမ့်မယ် လို့ မထင်ထားခဲ့။ မိန်းမတွေသည် အရင်က အတွေ့အကြုံ ရှိခဲ့ငြားလည်း ကြာရှည် လိင်ဆက်ဆံတာ မရှိခဲ့ရင် စောက်ဖုတ်ပေါက်သည် အသားတက်ပြီး ပြန်ကြပ်လာသည် ဆိုတာကို သူ လက်တွေ့ သိလိုက်ရသည် ။ အရသာထူးလှတဲ့ တင်းကြပ်အိနေတဲ့ ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို လီးတန် တဆုံး ထိုးသွင်းလိုက်ရင်း သူမ ရဲ့ ဖွံ့ထွားတဲ့ ရင်သားကြီးနှစ်လုံးကို သူ့မျက်နှာနဲ့ ပွတ်လူး နမ်းရှုံ့လေသည် ။ လီးတန်တဆုံး ၀င်လာလို့ အီးကနဲ အော်မိရင်း သူ့လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကို လှမ်းဆုပ်လိုက်မိတဲ့ ဒေါ်ဝိုင်းစုသည် လီးတန်ကြီး အနောက်ကို ထုတ်ဆုတ်သွားပြန်လို့ ရင်ထဲ ဟာတာတာကြီး ဖြစ်သွားရပြန်သည် ။
ဝေလကြီးသည် ကြပ်ပေမယ့် လိုးလို့ရနေပြီ ဖြစ်တဲ့ စောက်ဖုတ် အကောင်းစားကြီးကို တချက်ချင်း လိုးနေပါပြီ ။ တင်းကနဲ တထစ်ထစ်နဲ့ ၀င်သွားလိုက် စီးကနဲ ပြန်ဆုတ်လိုက်နဲ့ တချက်ချင်း မှန်မှန် သွင်းပေးထုတ်ပေးနေတဲ့ စံချိန်မှီ လီးတုတ်ကြီးကို ဒေါ်ဝိုင်းစု အစွဲကြီး စွဲသွားရပါပြီ ။ ကောင်းလိုက်တာ သားရယ်…..။ တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်တဲ့ ဒေါ်ဝိုင်းစုရဲ့ နို့သီးခေါင်း မာမာလေး တဖက်ကို စုတ်နေရင်း ဖင်ကော့ညှောင့်ထည့် ပေးနေသည် ။ ဝေလကြီးလည်း လိုးလို့ ကောင်းလွန်းတာကြောင့် အရသာထူးကဲပြီး ပြီးချင်ချင် ဖြစ်လာသည် ။ ဒေါ်ဝိုင်းစုမှာတော့ တော်တော်ကြာ ပြတ်လပ်ခဲ့တဲ့ ကာမစည်းစိမ်တွေကို ပြန်ရလိုက်တာမို့ နှစ်ကြိမ်တောင် လမ်း ဆုံး ပန်းတိုင်ကို တက်ရောက်ပြီးသွားသည် ။ လိုးဆောင့်ချက်တွေက ကောင်းလွန်းလို့ အောက်ကနေ ပင့်လိုက် ကော့လိုက်နဲ့ တုံ့ပြန်နေမိသည် ။“ ကောင်းလား အန်တီ…” “ ကောင်းတယ်…ဟင်း…တအား ကောင်းတယ်…သားရယ်….” ဖပ်ဖပ်ဖပ် ဖပ်ဖပ်ဖပ် ဖပ်ဖပ်ဖပ် ဆီးချက်မှန်မှန် ရိုက်ခတ်နေတဲ့ အသံတွေနဲ့ ညည်းအော်သံတွေ ထွက်နေသည် ။ “ အန်တီ…တခု လုပ်ပေးမလားဟင်….” “ ဘာလဲသား..လုပ်ပေးမယ်လေ…ဘာလိုလဲ…” “ ပုံစံပြောင်းပြီး လုပ်ချင်လို့….” “ သားက အန်တီ့ကို ဘယ်လို ပုံနေပေးစေချင်လို့လဲဟင်…..” “ ဖင်ပူးတောင်း ထောင်ပေးမလား….” ဒေါ်ဝိုင်းစုသည် သူမကို စောက်ဖုတ်လည်း ယက်ပေး..၂ကြိမ် ပြီးအောင်လည်း လိုးပေးထားတာမို့ သူလိုချင်တဲ့ ပုံစံကို ချက်ချင်းဘဲ နေပေးလိုက်ပါသည် ။
ဖင်ဝိုင်းစက်စက် ဖြူဖွေးဖွေးကြီးတွေက ထောင်ထားလို့ ပိုလှသလိုဘဲ ။ ဖင်တွေကြားက ပြူးထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးက ပိုလို့တောင် လှနေသည် ။ “ လှလိုက်တာ အန်တီရယ်…..” “ ဘာ…..” “ အန်တီ့စေက်ဖုတ်က တအားလှလွန်းလို့..” “ ကြံကြံစည်စည်ကွယ်….ဟင်းဟင်း….အန်တီ ရှက်လာပြီကွာ…..” “ မရှက်ပါနဲ့ဗျာ….အန်တီ့ဖင်ကြီးတွေကို ကြည့်ရင်း အန်တီ့စောက်ဖုတ်လှလှထဲကို ကျနော့်လီး ၀င်ထွက်နေတာကိ ကြည့်ရင်း လိုးလိုက်အုံးမယ်….” “ မင်းလေး..စကားပြော သိပ် ပက်စက်တာဘဲကွာ..အန်တီ နားရှက်တယ်….ဟွန်း….” ဝေလကြီး ဆွဲပြီ ။ သူ့လီးတန်ကို စောက်ဖုတ်ထဲ ဖိသွင်းထည့်လိုက်ပြီး တစွပ်စွပ် မြည်အောင် ဆောင့်လိုးလေ သည် ။ကောင်းလိုက်တဲ့ အရသာ….။
ဒေါ်ဝိုင်းစုလည်း တဟင်းဟင်းနဲ့ ဖင်ကြီးထောင်ပေးရင်း ခံနေသည် ။ ဝေလကြီးရဲ့ လီးတုတ်တုတ်ရှည်ရှည်ကြီးက လည်း တအား ဆောင့်ထည့်နေသည် ။ သူ့ေ၈ွးစိကြီးတွေက သူမရဲ့ ဖင်ကြားထဲကို တဖတ်ဖတ်နဲ့ ရိုက်ခတ်လို့ နေသည် ။ ဖပ်ဖပ်ဖပ်…….. ဖပ်ဖပ်ဖပ်…ဖပ်ဖပ်ဖပ်…အား…….အား…….အူး……..အမလေး…….အား……..အီး……… ကာမစည်းစိမ်ကို နှစ်ယောက်စလုံး ခံစားနေကြရင်း ဝေလကြီးသည် ကောင်းလွန်းတဲ့ အရသာကြောင့် သုတ် ရည်တွေကို တဖပ်ဖပ်နဲ့ ပန်းထုတ်လိုက်ရင်း ပြီးခြင်း ပန်းတိုင်ကို တက်လှမ်း ရောက်လို့သွားလေသည် ။..
“ခြစ်” ရင်း “ချစ်”